Fedora 35 Beta Yakaburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo kuburitswa kweiyo beta vhezheni yeFedora 35, iyo inoratidza shanduko kuenda kune yekupedzisira nhanho yekuyedza, umo mune chete kwakakomba bug fixes inobvumidzwa.
Iyi vhezheni inovhara Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT, uye Live inovaka Kununurwa nemamiriro akasiyana edesktop (spins).
Fedora 35 Beta Makiyi Nyowani Zvimiro
Pakati pekuchinja kwakanyanya kumira, tinogona kuwana izvozvo yekutanga vhezheni ye chinyorwa chitsva chekuparadzira: Kinoite Fedora, zvichibva paFedora Silverblue matekinoroji, asi uchishandisa KDE panzvimbo yeGNOME. Mufananidzo weFedora Kinoite hauna kukamurwa kuita mapakeji akapatsanurwa, inogadziridzwa nemaatomu uye inovaka kubva kumahofisi maRPM Fedora uchishandisa iyo rpm-ostree toolkit. Iyo yepasi nharaunda (/ uye / usr) yakaiswa kuverenga-chete. Iyo data inowanikwa yekushandurwa iri mu / var dhairekitori. Kuisa uye kugadzirisa zvimwe zvekushandisa, iyo flatpak yakamira yoga package system inoshandiswa, uko kunoshandiswa kunopatsanurwa kubva kune yakakosha system uye inomhanya mune yakasarudzika mudziyo.
Nezve shanduko dzemukati, mu iyo desktop yakagadziridzwa kuGNOME 41 pamwe nekugadzirisa patsva kwekushandisa kwekuisa manejimendi yekushandisa. Zvikamu zvitsva zvakawedzerwa kune iyo configurator yekumisikidza windows / desktop manejimendi uye kubatana kuburikidza nevashandisi venhare.
kunze kwaizvozvo akawedzera mutengi mutsva weiyo kure desktop desktop Uchishandisa VNC uye RDP protocols, dhizaini yemimhanzi inoridza yachinjwa, kuwedzera kune GTK 4 inoshandisa injini nyowani nyowani OpenGL-yakavakirwa kudzikisa kushandiswa kwesimba uye nekukasira kupa.
Tinogona zvakare kuwana kiosk modhi, , que inobvumira musangano weGNOME usina kumhanya, iko kushomeka kwekuita kweiyo imwe preselected app. Iyo modhi yakakodzera kurongedza basa reakasiyana-siyana ematafura emashoko uye ekuzvishandira-wega masitina.
Imwe shanduko inomira pachena ndeyekuti kugona kushandisa purogiramu-based session Wayland pane masisitimu ane macustomer eNVIDIA madhiraivha.
Iyo midhiya server PipeWire, izvo zvave zviri zvekutadza kubvira vhezheni yekupedzisira, yakafambiswa kuti ishandise iyo WirePlumber odhiyo mameseji maneja. WirePlumber inoita kuti iwe utore girafu yemidhiya node muPipeWire, gadzira madhijitari odhiyo, uye chengetedza nzira yehova dzemvura. Wakawedzera rutsigiro rweS / PDIF protocol yekuendesa mberi kweadhijitari odhiyo yekutepfenyura kuburikidza neiyo S / PDIF uye HDMI zvinongedzo.
Pamusoro pezvo, Fedora Cloud mifananidzo inoshandisa iyo Btrfs faira system nekumisikidza uye hybrid boot loader inotsigira kubhowa muBIOS uye UEFI masystem.
Iyo nzira yekumisikidza yechitatu-bato repositori yakagadziridzwa, Kubva isati yagonesa iyo "Yetatu-bato software zvinyorwa" yakatungamira kuiswa kwefedora-workstation-repositories package, asi zvinyorwa zvakaramba zvakaremara, ikozvino fedora-workstation-repositories package yakaiswa nekusarongeka uye iyo gadziriso inogonesa iyo repositori.
Iko kuisirwa kwechitatu-bato repositori ikozvino inovhara zvinoratidzwa zvevezera-zvakadzokororwa maapplication kubva kuFlathub dhairekitori, zvichireva kuti zvakafanana maapplication achave anowanikwa muGNOME software pasina kuisa FlatHab.
Iko kushomeka kwekushandisa kweDNS pamusoro peTLS (DoT) protocol yakaitwa kana ikatsigirwa neakasarudzika DNS server.
Wakawedzera rutsigiro rwe mbeva dzakanyatso nyatso scroll scroll positioning (kusvika pamakumi maviri ezviitiko pakutenderera).
Mitemo yekusarudza inosanganisa yakachinja pakuvaka mapakeji. Kusvika parizvino, iyo mirawo inodiwa kuti uvake pasuru uchishandisa GCC, kunze kwekunge pasuru yacho ingangonyorwa chete uchishandisa Clang.
Mitemo mitsva inobvumidza vanochengeta mapakeji kuti vasarudze Clang kunyangwe chirongwa chiri kumusoro chikatsigira GCC, uye zvinopesana, kusarudza GCC kana chirongwa chiri kumusoro chisingatsigire GCC.
Paunenge uchigadzirisa disk encryption neLUKS, otomatiki kusarudzwa kweakanaka chikamu saizi inopihwa, ndiko kuti, kune ma disks ane 4k epanyama zvikamu, chikamu saizi chichava 4096 muLUKS.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kuyedza mufananidzo weiyi beta vhezheni yeFedora 35 iyo iwe yaunogona kuwana pane yayo yepamutemo webhusaiti. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Fedora 35 Beta Yakaburitswa